El Salvador inomhanyisa ne .kufamba
Location: musha » Kutumira » Newsletter » El Salvador inomhanyisa ne .kufamba
Iine mahombekombe akanaka uye akawanda evashanyi uye eco-yekushanya sarudzo, El Salvador ibwe rekuwana muCentral America.
Iine mahombekombe akanaka uye akawanda evashanyi uye eco-yekushanya sarudzo, El Salvador ibwe rekuwana muCentral America. Kunyangwe hazvo isina kuzivikanwa uye nyowani kune yepasirese yekufamba nzvimbo, El Salvador iri kukurumidza kuve yakasarudzika nzvimbo kuCentral America. Senzira yekusvetuka kutanga nzvimbo yayo mumusika wepasirese wekushanya, El Salvador yakaunza hushumiro hutsva hwebasa rekushanya muna 2005. Sechikamu cheiyi purojekiti yakanangwa, El Salvador yakagamuchira www.ElSalvador.travel seshoko rayo rekutanga rekushambadzira.
Achiziva kuti .travel zita raizongo batanidza nyika senzvimbo yekushanya, El Salvador yakatenga zita rayo muna 2006, asi ichangobva kuvhura webhusaiti nyowani, yekumaka uye kushambadzira kuedza neElSalvador.travel. Kubva pakatangwa uye zvimwe zvakanangwa, kukura kwekushanya kuEl Salvador kwave kwakakura muna2008.
"Takasarudza kutenga kero yedu yekufamba sezvo ichinyatsobatanidza nyika yedu senzvimbo yekushanya," akadaro Ruben Rochi, Gurukota rezvekushanya kuEl Salvador, "Inobatsira kukurumidza kuita mamiriro munzvimbo ino yemakwikwi, yekushanya yepasirese."
Nemakumi ezviuru zvevashanyi kunzvimbo iyi mushure memwedzi isingasviki miviri kubva pakatangwa, saiti iri kukura uye kuwedzera vashanyi vayo neinenge 30% pamwedzi. Muchokwadi ne .travel uye El Salvador yekushambadzira kwekushambadzira, kushanya kuEl Salvador kumisika yepasi rose kwakawedzera ne26% kubvira gore rapfuura.
El Salvador iri kuramba ichiwedzera kukurumbira pakati penzendo dzevashanyi nekuda kwemamiriro ekunze akanaka uye dzakasiyana siyana dzekunakidzwa iine mamwe emakomo anopenya uye mahombekombe munyika. Kubva kuSanta Ana volcano, inova ndiyo hombe muPacific volcano cheni kuenda kuLos Cobanos beach uko iwe kwaunogona kuwana imwe yeakanakisa scuba diving munyika, mumwe anonyatso kuwana chiitiko chesarudzo muEl Salvador.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve El Salvador uye kuronga kushanya kune ino yakanaka nzvimbo, ndapota enda Www.ElSalvador.travel.
E Savhadho ushanyi
Hofisi yekushanya yeIran inovhura muTurkey
Pre MITM yekuongorora rwendo kubudirira kweCagagena de Indias
Ndege Itsva Isingamire Kubva kuToronto Kuenda Nashville
Tsvagiridzo Itsva Inoratidza Kudonha muKuonekwa kweCancer Nekuda kwe...
South African Airways yawedzera huwandu mushure meComair...
Ndeipi nyika yakasimuka zvakanakisa kubva kuCOVID?